Amnesty oo cambaareysay shuruuda baasaboorka | Somaliska
Madelaine Seidlitz oo ah Qareen ka tirsan hay'ada Amnesty International ee u dooda xuquuqul insaanka ayaa cambaareysay shuruuda baasaboorka ee ay Sweden ku xirtay qaxootiga Soomaaliyeed ee degenaanshaha ka soo dalbada dalka dibadiisa. "Sharcigaan waxa uu caawinayaa dadka muqalasiinta " ayay tiri Madelaine Waxay sheegtay in Soomaaliya ay tahay meelaha ugu khatarsan caalamka sidaa darteedna waa in aysan Sweden ku xirin shuruud qoxootiga Soomaalida. "Waa foolxumo in caruurta lagu xiro in ay cadeeyaan aqoonsigooda si loogu keeno waalidgood" ayay tiri Madelaine Hay'ada qoxootiga ee UNka ayaa sheegtay in aysan habooneyn in lagu xiro Soomaalida aqoonsi si ay kharaabadooda u keensadaan. "Haddii hooyo Soomaaliyeed la siiyo sharci, waa in caruurteeda loo keenaa oo aan lagu xirin cadeyn aqoonsi" ayay hadalkeeda ku soo gabangabaysay Madelaine. Xigasho: SmålandsPosten
Amnesty oo cambaareysay shuruuda baasaboorka
Madelaine Seidlitz oo ah Qareen ka tirsan hay’ada Amnesty International ee u dooda xuquuqul insaanka ayaa cambaareysay shuruuda baasaboorka ee ay Sweden ku xirtay qaxootiga Soomaaliyeed ee degenaanshaha ka soo dalbada dalka dibadiisa.
“Sharcigaan waxa uu caawinayaa dadka muqalasiinta ” ayay tiri Madelaine
Waxay sheegtay in Soomaaliya ay tahay meelaha ugu khatarsan caalamka sidaa darteedna waa in aysan Sweden ku xirin shuruud qoxootiga Soomaalida.
“Waa foolxumo in caruurta lagu xiro in ay cadeeyaan aqoonsigooda si loogu keeno waalidgood” ayay tiri Madelaine
Hay’ada qoxootiga ee UNka ayaa sheegtay in aysan habooneyn in lagu xiro Soomaalida aqoonsi si ay kharaabadooda u keensadaan. “Haddii hooyo Soomaaliyeed la siiyo sharci, waa in caruurteeda loo keenaa oo aan lagu xirin cadeyn aqoonsi” ayay hadalkeeda ku soo gabangabaysay Madelaine.
Xisbiga-dhexe (Centerpartiet) oo ku baaqay in xuduudaha loo furo soogalootiga
Sweden oo 200 qof ka soo qaaday Tunisiya
Wasiirka socdaalka oo booqasho ku tagay Rinkeby [Video]
August 16, 2010 at 08:18
sharcigan aay ku soo rogeen soomalida swden waxaa ka faa iideeystay dadka dadka keena intii aay swden aay joojisay waxaa bug lagu soo geliyey dad garaya kun qof food oo soomaali ah dadka dadka keena ayaa ka faideystay laynkana wxuu marayaa ilaa iyo lawatan kun oo shilinka maraykanka ah